Twitter Video Downloader - Twitter Videos & GIF အွန်လိုင်း ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ
တွစ်တာမှ တွစ်တာ ဗီဒီယိုများနှင့် GIF များကို twitterfk
Get video file
Supported format url:
Twitterfk Video Downloader အကြောင်း
Twitterfk သည် သင့်အား Twitter ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ကူညီပေးသည့် အခမဲ့အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို desktop PC များ၊ စမတ်ဖုန်းများ (Android၊ iPhone)၊ iPad နှင့် တက်ဘလက်များတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ပြီးလျှင် အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသော MP4 သို့မဟုတ် MP3 အဖြစ် ဗီဒီယိုကို သိမ်းဆည်းပါ။
Twitter အက်ပ် သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက်သို့ သွားပါ၊ ဗီဒီယို URL ကို ကူးယူပြီး ၎င်းကို အထက်ပါ ထည့်သွင်းမှုအကွက်တွင် ကူးထည့်ပါ။ မောက်စ်အနည်းငယ်နှိပ်ရုံဖြင့် ဗီဒီယိုတစ်ခုကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ ဝန်ဆောင်မှုသည် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး ဒေါင်းလုဒ်အရေအတွက် ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းမလိုအပ်သောကြောင့် လွယ်ကူပြီး ဘေးကင်းပါသည်။
TWITTER ဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ။
Twitter မှ ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်၊ ဤလွယ်ကူသော အဆင့်သုံးဆင့်ကို လိုက်နာရန် လိုအပ်သည်။
Share နှိပ်ပြီး Copy Link ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် Twitter ဗီဒီယို URL ကို ကူးယူပါ
Twitterfk အထက်ပါအကွက်တွင် Twitter ဗီဒီယို URL ကို ကူးထည့်ကာ ဒေါင်းလုဒ်ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
Mp4 ဗီဒီယိုကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ဒေါင်းလုဒ်ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ
HOW TO QUICK DOWNLOAD TWITTER VIDEOS?
အကြံပြုချက်-ဗီဒီယိုများဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် လင့်ခ်ရှိ "twitter" ဟူသောစကားလုံးနောက်တွင် "fk" ထည့်ပါ Twitter မှ ပိုမိုမြန်ဆန်သောနည်းလမ်းဖြင့်။
Twitterfk ဖြင့် အွန်လိုင်း Twitter ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Twitter ဗီဒီယိုဒေါင်းလုပ်ကို အသုံးပြု၍ ယခု Twitter ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ ထို့အပြင်၊ ဗီဒီယိုကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးသည်နှင့် ဗီဒီယိုကို ချက်ခြင်းသိမ်းဆည်းနိုင်သောကြောင့် 'Twitter မှဗီဒီယိုများကို သိမ်းဆည်းနည်း' နှင့်ပတ်သက်ပြီး သင်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။
Twitterfk ကို အသုံးပြု၍ iPhone တွင် Twitter ဗီဒီယိုကို မည်သို့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရမည်နည်း။
iPhone ပေါ်ရှိ Twitter မှ ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် သို့မဟုတ် Twitter မှ mp4 သို့ ပြောင်းရန်အတွက် Twitterfk.com ဝဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည်။ iOS 13 နှင့်အထက်တွင်၊ သင်သည် Safari ဝဘ်ဘရောက်ဆာတွင်သာ အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များမှ ဗီဒီယိုများကို သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။ iOS 12 နှင့် အောက်များအတွက်၊ သင်သည် "Documents by Readdle Inc" ၏အကူအညီဖြင့်သာ ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ built-in browser နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် Apple App Store မှအက်ပ်။
လုပ်ငန်းစဉ်သည်ရိုးရှင်းပါသည်။ Twitter အက်ပ်လီကေးရှင်းမှ ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြင့် tweet ၏ URL ကို ကူးယူရန် သို့မဟုတ် ၎င်းကို ဝဘ်ဘရောက်ဆာတွင် ဖွင့်ရပါမည်။ မျှဝေရန်ခလုတ်ကို နှိပ်ပြီး ပေါ့ပ်အပ်မီနူးရှိ ကော်ပီလင့်ခ်ကို ရှာပါ။ URL ကို ကူးယူပြီး Twitterfk.com သို့ ပြန်သွားကာ စာမျက်နှာ၏ ထိပ်ရှိ ဖောင်တွင် လင့်ခ်ကို ကူးထည့်ပါ။ ဒေါင်းလုဒ်ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ၊ စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် လင့်ခ်များကို သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
sss Twitter ဗီဒီယိုချွေတာမှုတွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ကန့်သတ်ချက်များ ရှိပါသလား။
မဟုတ်ဘူး! သင်ဆန္ဒရှိသလောက် ဗီဒီယိုများစွာကို သိမ်းဆည်းနိုင်သည်၊ တစ်ခုတည်းသောကန့်သတ်ချက်မှာ ဒေါင်းလုဒ်ခလုတ်ကိုနှိပ်သည့်ကြားတွင် စောင့်ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ အခြားလင့်ခ်တစ်ခုတောင်းဆိုရာတွင် ဆယ်စက္ကန့်နှောင့်နှေးမှုရှိသည်။ ဆာဗာတင်ခြင်းကို လျှော့ချရန်နှင့် အကောင်းဆုံးဒေါင်းလုဒ်မြန်နှုန်းသေချာစေရန် ဤနှောင့်နှေးမှုသည် မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။
Android တွင် Twitter ဗီဒီယိုများကို မည်သို့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရမည်နည်း။
Android တွင် Twitter ဗီဒီယိုကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်၊ အဆင့်သုံးဆင့်လမ်းညွှန်ကို လိုက်နာရန် လိုအပ်သည်။ Twitter အက်ပ် သို့မဟုတ် ဝဘ်စာမျက်နှာကို ဖွင့်ပါ။ ဗီဒီယို tweet ၏ URL ကိုရှာပြီး ကူးယူကာ Twitterfk.com သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။ လင့်ခ်ကို စာမျက်နှာပေါ်ရှိ ဖောင်ထဲသို့ ကူးထည့်ကာ "ဒေါင်းလုဒ်" ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
အခမဲ့ Twitter ဒေါင်းလုဒ်ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ။
Twitter video downloader သည် သင့်အား မည်သည့်စက်ပစ္စည်းတွင်မဆို အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုထားသည်။ သင်၏ browser တွင် extension ကိုထည့်ရုံဖြင့်မီဒီယာကို Twitter စာမျက်နှာမှတိုက်ရိုက်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ သင်သည် sss Twitter ဒေါင်းလုဒ်ဝဘ်ဆိုက်သို့သွား၍ ဒေါင်းလုဒ်ကို run ရန် input အကွက်ထဲသို့ URL ကို ကူးထည့်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏စက်တွင် သိမ်းဆည်းထားသည့် ဖိုင်များသည် အဘယ်မှာရှိသနည်း။
မူလအားဖြင့်၊ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသောဖိုင်များကို "ဒေါင်းလုဒ်များ" ဟုခေါ်သည့် မူရင်းဘရောက်ဆာဖိုင်တွဲတွင် သိမ်းဆည်းထားသည်။ ဤဖိုဒါကို အများအားဖြင့် သင့်ဒက်စ်တော့ကိရိယာ (Windows၊ macOS၊ Linux နှင့် အခြား) ပေါ်ရှိ "စာရွက်စာတမ်းများ" ဖိုဒါတွင် သိမ်းဆည်းထားသည်။ Windows ပေါ်ရှိ CTRL+J သို့မဟုတ် macOS တွင် CMD+J ကိုနှိပ်ပါ၊ သင့်ဘရောက်ဆာ၏ဒေါင်းလုဒ်မှတ်တမ်းကိုဖွင့်ရန်၊ ထိုနေရာတွင် သင်အစောပိုင်းဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသောဖိုင်များကိုတွေ့နိုင်သည်။
သင့် iPhone သို့မဟုတ် Android တွင် ဤဖိုင်တွဲကို ရှာရန်၊ သင့်ဖုန်း သို့မဟုတ် တက်ဘလက်၏ ရှာဖွေရေးဘားပေါ်ရှိ ဖိုင်တွဲအမည်ကို နှိပ်လိုက်ရုံဖြင့် ဖုန်း၏ရှာဖွေရေးဘားကို ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ ရှာဖွေမှုဘားနှင့် မရောထွေးပါနှင့်။
© 2019 TwitterFk.com